Ikhiphedi ye-Metal Dome - Xiamen Jin Weitai Rubber & Plastic Co, Ltd.
Izinkinobho zeRubber Metal Dome Keypads: Ziyini, Futhi Zenzani?
Ukuchazwa Kwezindikimba Ze-Rubber Metal Dome Keypads
I-hybrid ye-membrane ye-flat-panel membrane kanye namakhibhodi wokushintsha umshini, ikhibhodi ye-dome switch switch iletha imithwalo emibili yamabhodi wesifunda ndawonye ngaphansi kwekhiphedi yerabha. Lapho ukhiye ucindezelwa, ugoba idome, oxhumanisa imithambo emibili yomjikelezo bese uqedela ukuxhumeka ukufaka uhlamvu. Lezi zinkinobho zisebenzisa amashintshi edayimane noma ama-polyurethane domes. Ukushintshwa kwensimbi yensimbi izingcezu zensimbi engenasici enikeza abasebenzisi impendulo enethambile lapho icindezelwa. Lezi zinhlobo zensimbi zokushintsha kwe-dome zivame kakhulu, ikakhulukazi ngoba zithembekile kwimijikelezo engaphezu kwezigidi ezi-5. Ukushintshwa kwensimbi kungafakwa ku-nickel, isiliva, noma igolide.
Indwangu: insimbi engagqwali, i-nickel-plated
Ukubekwa kwegolide kuyatholakala
Izinga lokushisa elisebenzayo: -40 ° F kuya ku-+25 ° F (-40 ° C kuya ku- + 105 ° C)
Ukushisa kwesitoreji: -67 ° F kuya ku- + 257 ° F (-55 ° C kuya ku- + 125 ° C)
Kutholakala ku: Tube, Cut-Tape, Tape no Reel, no Digi-Reel
Izinzuzo ze-Rubber Metal Dome Keypads
Ngenkathi ama-domes eyenziwe nge-polyurethane enamanani amancane abiza kakhulu kunokubiza kwensimbi, amakhethini wensimbi ancanyelwa ngenxa yesigaxa sokhilimu, esikhundleni sokuphendula ngokuthi "mushy" okuvame ukuhlinzekwa ngokuwa kwemodamo okuwohlokayo. Abasebenzisi bezikhiphedi zensimbi enjoloba ngokushesha bayazi ukuthi isenzo sabo samukelwa yinkinobho yokusebenzisa ngoba bayakwazi ukuzwa ukuphendulwa koshintsho lwensimbi. Izinkinobho ze-Rubber metal dome nazo zinokucaciswa okuphezulu kwempilo, okusiza izindleko zazo eziphakeme. Umkhakha wezimoto ikakhulukazi opts ukusebenzisa ikhiphedi yensimbi enjoloba, ngoba amakhethini wensimbi ahlanganisiwe aqinisekisa impilo ende ehlanganiswe nama-haptics amahle kakhulu.
Inzuzo eyodwa enkulu yekhiphedi yama-dome yiphrofayili yabo ephansi. U-Apple umemezele ekuqaleni kwentwasahlobo ka-2015 ukuthi kuzobe kusetshenziswa switch entsha yensimbi engagqwali ku-MacBook entsha ukufeza umhlangano osemqoka mayelana no-40% omncane kunokwakheka kwangaphambilini. Ushintsho olusha lwensimbi engagqwali “oluqinisa inqubo yamabhabhathane lunikeza impendulo eqinile nempendulo enhle.”
Amathayela ethu wensimbi ethambile ayizithintana zesikhashana zokushintsha ukuthi, uma isetshenziswa ngokubambisana nebhodi lesifunda eprintiwe, umjikelezo we -lex, noma ulwelwesi, iba ngamabhenti evulekile avulekile. Ama-Tactile iron domes afakwa emabhodini wesifunda aphrintiwe ngeteyiphu yokunamathela ethinta ingcindezi noma abanjwe ngendlela ephaketheni. Esimweni sawo sokuvuseleleka, izinsimbi zensimbi tactile ziphumula kumaphethelo wangaphandle wendlela yokuqala. Lapho kucindezelwa, amadokhumenti ayawa futhi axhumane nendlela yesibili, ngaleyo ndlela avale isekethe. Izinhlobo eziningi ezahlukahlukene namandla okubuka kuyatholakala ukuze alingane nesicelo sakho esithile. Zingasetshenziselwa ukuthintana ngogesi, i-tactile-element kuphela, noma zombili zikagesi nezithambekisayo.
FUNDA OKWENGEZIWE NGEKHAMPANI YAKHO
Silicone Rubber Keypad, Ikhiphedi ye-Rubber yangokwezifiso, Ikhiphedi yeSilicone,